News | airport
News | Tag: airport
१२ घण्टादेखि अवरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका कारण अवरुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केहीसमय अघिदेखि सञ्चालनमा आएको छ । झण्डै १२ घण्टादेखि अवरुद्ध विमानस्थल खुलेसँगै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएको विमानस्थलले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरीदमा ठूलो परिमाणको बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कन्तबिजोग, पिच उप्कँदा जहाज आकासमै होल्ड
काठमाडौं । आइतबार दिउँसो २ बजेर १० मिनेट जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक्कासी सबै उडान र अवतरण बन्द भए। विमानस्थल टावरले अवतरण गर्न तयार भइसकेका जहाज आकासमै होल्ड गरायो। यसको कारण थियो धावनमार्गको पिच उप्कनु।
काठमाडौं । प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप नभएका युवालाई अब वैदेशिक रोजगारीमा रोक लगाइने भएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजराीमा जाने युवालाई अनिवार्य कामसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीपको ज्ञान हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन तयारी गरेको छ।
मन्त्री अधिकारीको आर्शिवादले विमानस्थल तस्करको अखडा बन्ने खतरा !
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तस्कर र गैरकानूनी काम गर्ने गिरोहको अखडा बन्ने खतरा बढेको छ । व्यापारीका रुपमा विमानस्थ प्रवेश गर्नेहरु गैरकानूनी र सम्झौता विपरितका काम गर्न मात्र लालायित हुन्छन्
दुई उत्तर कोरियाली युवती विमानस्थलबाट पक्राउ
काठमाडौं । प्रवेशाज्ञा (भिसा)ले म्याद सकिएपछि पनि नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने दुई उत्तर कोरियाली युवतीलाई त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्ययगनम कार्यालयले फिर्ता इन्ट्री रिफ्युज गरेको छ ।
शक्ति केन्द्रकाे अाडमा विमानस्थलभित्र ब्यापारी सुवास श्रेष्ठको सिन्डिकेट
विमानस्थलबाट गुप्तचरको सेटै परिवर्तन !
काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विमानस्थल निगरानी उपशाखामा खटिने पूरै सेट विभाग तानिएको छ। सेटलाई विभाग तानेर उपशाखामा क–कसलाई पठाइयो भन्ने विभागले खुलाएको छैन।